3 arrin oo laga faa’iidayo iskaashiga Shiinaha iyo Soomaaliya dhex-maraya - Caasimada Online
Home Warar 3 arrin oo laga faa’iidayo iskaashiga Shiinaha iyo Soomaaliya dhex-maraya
3 arrin oo laga faa’iidayo iskaashiga Shiinaha iyo Soomaaliya dhex-maraya
Muqdisho (Caasimada Online) – Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Axmed Ciise Cawad, ayaa arrin muhiima ku sheegay in dib usoo nooleynta xiriirka Somalia kala dhexeeya dalka Shiinaha.
Wasiir Cawad waxa uu cadeeyay in dowlada Somalia ay xiligaan ahmiyad gaara u aragto inuu soo laabto xiriirkii soo jireenka ahaa ee kala dhexeeyay dalka Shiinaha, waxa uuna carab dhabay in xitaa Geeska Africa ay muhiim u tahay iskaashiga Shiinah.
Cawad waxa uu sheegay in Somalia ay garaneyso waxa u dan ah, waxa uuna cadeeyay inaanu jirin cid ay Somalia kala tashaneyso hormarkeeda, maadaama ay tahay dowlad madax-banaan oo xor ah.
Axmed Ciise Cawad oo tilmaamayay ahmiyada iskaashiga ayaa sheegay in Somalia ay ku taalo Goob muhiim u ah isku xirka Ganacsiga Aduunka, wuxuuna xusay in xiriir taariikhi ah uu kala dhaxeeyo Shiinaha oo Iskaashi dhinacyo badan uu dhex maray.
Waxa uu carab dhabay in iskaashiga ay dowlada Somalia la sameyneyso Shiinaha uu leeyahay faa’iidooyin gaar ah waxa uuna ku sheegay 3 oo kala ah:-
1-Dowlada Somalia oo aan heysan mid lamida Shiinaha maadaama dhismooyinka kaabayaasha dhaqaale iyo waddooyinka ay gacanta ku heyn jirtay dowlada shiinaha.
2-Xiriirka Somalia iyo Shiinaha oo sanado badan jirsaday, iyadoo hanaanha iskaashi ee shiinaha uu yahay mid ay ka bixikarto Somalia oo aan heysan dhaqaale ku filan.
3-Shiinaha oo ahmiyad gaara u arka Somalia oo ku taal goob muhiim u ah isku xirka Ganacsiga Aduunka, waxa ay hoos u dhigeysaa dhaqaalaha ay Somalia ku bixin laheyd dib usoo nooleynta kaabayaasha maadama ay Somalia gorgortan ku galeyso kheyraadkeeda.
Sidoo kale, Wasiir Cawad waxa uu cadeeyay in mar waliba mowqifka dowlada uu yahay inay ka faa’ido dowladaha ka quwada badan, si ay uga soo kabato dhibta burbur ee wali ka jira dalka.
Haddalka Wasiir Cawad ayaa muujinaaya in dowlada Somalia ay ahmiyad gaara u aragto inay soo ceshato xiriirka soo jireenka ah ee kala dhexeeyay dalka Shiinaha oo taariikh ku leh Somalia.